सलमान खानको भाइ अरवाज दोस्रो विवाह गर्दै ! « Ramailo छ
सलमान खानको भाइ अरवाज दोस्रो विवाह गर्दै !
अहिले बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको विवाहको चर्चा चलिरहेको छ । केही दिन अघिमात्र उनले निक जोनससँग इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन् । अर्काेतिर बलिउड अभिनेता सलमान खानका भाइ तथा अभिनेता अरबाज खानको पनि विवाहको चर्चा भारतीय मिडियामा हुन थालेको छ ।
भारतीय एक पत्रिकालाई खान परिवार निकट स्रोतले अरबाजको विवाह छिट्टै हुनसक्ने बताएका छन् । अरबाजले विवाह गर्ने सोच बनाए पनि परिवारले अनुमति नदिईएकोले यो विवाह ढिलो भएको भारतीय मिडियामा समाचार प्रकाशित भएका छन् । तर, परिवारले नमाने पनि अरबाजले बिहे गरेर नै छाड्ने भएका छन् ।
परिवारले चाहिं अरबाजलाई आफ्नै पहिचान बनाउनमा फोकस हुन सल्लाह दिएको छ । सलमान खानको भरमा पहिचान बनाउँदा पहिलेको पारिवारिक जीवनमा समस्या आएकाले अब त्यो परिवर्तन गर्नु पर्ने उनको परिवारले सल्लाह दिएको भारतीय मिडियामा समाचार छ ।
उता, अरबाजले जर्जियासँग विवाह गर्ने अन्तिम तयारी गरिररहेको भारतीय मिडियाको दाबी छ । उनी अहिले जर्जिया एन्ड्रियानीसँग डेट गरिरहेको कुरा चाहिँ केही पहिले नै आएको थियो । जर्जिया बलिउड फिल्ममा काम गरिसकेकी अभिनेत्री हुन् ।
केही समय अघि अरबाज र जर्जिया कार्यक्रमहरुमा सँगै देखिएका थिए । गत वर्षको आइपिएलमा र केही समयअघि सञ्जय कपुरको घरमा भएको पार्टीमा यी दुई सँगै देखिएपछि उनीहरुको सम्बन्धबारे चर्चा चल्न थालेको थियो ।
अरबाजको पहिलो विवाह सन् २०१७ को मे मा छुटेको थियो । पूर्वश्रीमती मलाइका अरोडा र अरबाजका छोरा अरहान खान १५ वर्षका भइसकेका छन् ।